Sheekh Shariif: Dalkaan waxbaa naga galay mana ogolin inuu burburo!. – Somali Top News
Sheekh Shariif: Dalkaan waxbaa naga galay mana ogolin inuu burburo!.
September 23, 2019 Somali Top News	0 Comments Sheekh Shariif: dalkaan waxbaa naga galay mana ogolin inuu burburo!.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta Shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa eedeyn u jeediyay Xukumada Faderaalka Soomaaliya uu sheegay in ay ku fashilantay Waxyaabihii loo igmaday sida uu sheegay.
Waxa uu sheegay in laga hor istaagay Safar uu ugu socday Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose si uu ugu qayb galo Xaflada Caleema Saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo lagu wado dhawaan in ay ka qabsoonto Kismaayo.
Sheekh shariif ayaa sheegay in Xukumada hada talada haysa ay ka bayrtay Sharcigii dalka u yaalay isla markaana loo baahanyahay in ay ka tashadaan shacabka Soomaaliyeed, halka uu dambeeyo Dalkaan sida uu hadalka uu dhigay.
“Dowladda waxay ku socotaa hannaan qaldan oo keenaya dowladdu in ay burburto kama aqbali karno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo boorsadiisa iyo suudkiisa wato annaa magacaabay, dalkaan wax ka galay oo kheyraad ah ma jiro, asaa ka faa’deystay, Xasan Cali Kheyre waa sidoo kale, annaga dalkaan waxbaa naga galay mana ogolin inuu burburo, dariiqa uu ku socdo waa qaldan tahay, waxaan leeyahay joogsada meesha aad joogtiin ma dhaafi kartid Soomaalina ha isu timaado”ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in dowladu ku fashilantahay in ay wax ka qabato dib u eegista Dastuurka dalka, Amaanka iyo arimaha doorashooyinka oo ku sifeeyay mid ay ku fashilantahey Xukumada Soomaaliya.
Sheekh Shariif Madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka in loo baahan yahay in laga wada hadlo halka uu dalkaan ka socdo.
“Waxaan rabaa inaana ugu yeero dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkaan meesha uu ku socdo, haddaan Al-Shabaab la dirireynin dalkaan meel qaldan ku socdaa dadka soomaaliyed waxaa lagama marmaan ah inay isu yimaadaan inay talo yeeshaan, aniga waxa igu dhacay waa wax fudud, waa wax aan ka tagi karo, wax ka weyn ayaa haleysan, waxaa arkaa dowladnimada Soomaaliyeed oo dhumeyso, si aysan taasi u dhicin dadka Soomaaliyeed iyo cid walba wax galka ah waxaa qabaa in loo istaago sidii qarankan loo badbaadin lahaa”
Hadalkaan Sheekh Shariif ayaa daba socda awaamiirta dhanka duulimaadyada ee ay dowladdu ku soo rogtay diyaaradaha aadaya Kismaayo, iyadoo shalay la joojiyay diyaarad Muqdisho ka qaadi laheyd Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku sii jeeday Kismaayo si uu uga qayb galo Xaflada Caleema saarka Axmed Madoobe oo lagu wada in ay Kismaayo ka dhacdo 26-da bishaan.
← Daacish oo ku sii xoogeysaneysa Soomaaliya inta ay jirto dowladda Nabad iyo Nolol
Xasan Sheekh: Waxaad haysaan wadadii lagu hungoobay oo lagu dumay →
Imaaradka oo Boosaaso ka dejiyay qalab caafimaad oo COVID-19 loogu talagalay
April 9, 2020 April 9, 2020 Somali Top News 0
Dowladda Pakistan oo soo saartay nidaam cusub oo Soomaalida ku heli karaan Fiisaha
Magaalada Jigjiga oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay wefdi ka socday ONLF